MWC 2016 wuxuu ii daayaa dhadhan macaan | Wararka IPhone
MWC 2016 wuxuu iiga tagayaa dhadhan macaan
Wararka IPad | | Tartanka, iPad
MWC-da in badan la sugaayay ee sanadkaan horay ayey udhamaatay sida sanadwalba dhacdana dhadhanka ay katagaan waa mid qadhaadh. Haa, waa inaan qiraa sida Apple "fanboy" iyo aqoonyahan aasaasi ah ee wax kasta oo ka baxsan dunidaas, indhaha aan ku arko carwadan ayaa laga yaabaa inaysan ahayn kuwa ugu habboon, laakiin sidoo kale waa inaan dhahaa sannad kasta oo aan sameeyo dadaalka si aad looga warqabo oo aan u xiiseyno wararka ay soo saarayaasha kale na siinayaan, iyadoo Samsung ay hogaamineyso. Hal sano oo dheeri ah waxay umuuqatay cadaalad ay kujiraan qalab badan oo aan faaido lahayn, sheeko badan oo saynis ah iyo tan dhabta ah, waxa runti muhiim ah oo aan gacmaheena kuheli karno runtii wax cusub kuma soo kordhin, marka laga reebo kiisaska gaarka ah.
1 Samsung in ka badan Apple waligeed, LG si adag ayey u sharraxday, Xiaomi na badh ayuu naga tagayaa
2 Alaab-toobiyeyaal aad u tiro badan oo la buuxiyo
Samsung in ka badan Apple waligeed, LG si adag ayey u sharraxday, Xiaomi na badh ayuu naga tagayaa
Samsung waxay soo bandhigtay labadeeda calan ee sanadkan, Galaxy S7 cusub iyo S7 Edge, oo ah laba taleefan oo casri ah oo aad u isdaba joog ah marka loo eego jiilkii hore, laga yaabee inay aad u badan yihiin. Calaamadda Kuuriya waxay umuuqataa inay rabto inay kudayasho Apple xitaa istiraatiijiyadeeda suuqa, iyo ayaa doortay inay raacdo Apple raadkeeda iyadoo la socota jiil "S", maxaa yeelay way fiicnaan lahayd in loo yeero Galaxy-kan S6S, in kastoo laga yaabo inay ka badan yihiin "S" koontada. Naqshadeynta ayaa ficil ahaan la mid ah tii hore, taas oo aan ku xumaaneyn fekerkeyga (ma ahan sidaas kuwa kale oo badan), maxaa yeelay aad ayey u qurux badan tahay. Waxay kaamirada ka dhigeen mid sii yaraata oo waxay ku sii hayeen dhamaadkaas qiimaha leh alaab tayo leh, maadaama taleefan qiimihiisu u qalmo. Marka laga hadlayo inta soo hartay, kala duwanaansho yar, ama halkii, wax yar oo ka mid ah wixii la filayay: processor ka fiican, kaamiro ka fiican, dib u soo kabasho ka soo kabashada microSD iyo caabbinta biyaha ee ay ka tagtay sanadkii hore ... waana taas.
Haa, Apple sidoo kale wuu sameeyaa, laakiin maya. Sababta oo ah iPhone 6s waa isku mid banaanka ilaa 6da, laakiin waxaa jira isbadalo software ah iyo teknolojiyad cusub oo shaashad ah, 3D Touch, oo u muuqan karta wax yar laakiin waa ku filan tahay. Sida iska cad sidoo kale isla hagaajinta processor-ka, iyo RAM-ka waa la labanlaabay, kaamirada sidoo kale waa la hagaajiyay. Xitaa isbarbar dhiga Apple, isbeddelada Galaxy S7 kan yar damac Haddii qaababkii hore aysan u dhammayn sidii ay shirkaddu filaysey, maxaad ugu sii wadaysaa istiraatiijiyad isku mid ah?
LG waxay ahayd shirkada kaliya ee go’aansatay inay hal-abuurto, soo bandhigto wax ka duwan, taas oo had iyo jeer khatar ah sidaa darteedna ay tahay in la qadariyo. Ka tagida fikirka aberrant ee "casriga casriga ah" ee Google kor u qaadayo, LG waxay bixisaa wax la mid ah laakiin leh dhadhan fiican. LG G5 waa mobiil qurux badan, oo leh qiimo jaban iyo qeexitaan heer ah waxa ay suuqa rabto, iyo taasi waxay bixisaa suurtagalnimada in lagu daro qaybo siiya fursado cusub: maqal wanaagsan, ikhtiyaarro badan oo loogu talagalay kamaradda, batteri badan, iwm. Waan arki doonaa sida dadweynuhu u soo dhoweeyaan tan, sida loogu maareeyo nolosha dhabta ah iyo, wax walba, qiimaha. Sababtoo ah soo bandhigida sida LG oo kale iyo qarinta qiimaha aaladdaada waxay keenaysaa su'aalo badan. Waa inaan ka warqabnaa.
Xiaomi way soo daahday, laga yaabee inay soo daahday, sidaas awgeedna lumisay awooddii yaabka. Haddii waxa aad keensato sidoo kale aysan aheyn wax lala yaabo, natiijada ugu dambeysa waxay tahay "wax badan baan filayay." Ugu dambeyntiina, sumadda Shiinaha ayaa ku sii jirtay "mobilada wanaagsan iyo kuwa raqiiska ah", taas oo wanaagsan, laakiin laga yaabee inaysan ku filneyn inay isku soo bandhigto carwo sida MWC oo khibrad badan leh. Ha qaldamin, Xiaomi Mi5 cusub ayaa soo jiidata dareenka, laakiin maahan wax qaas ah, laakiin qiimaheeda. Ma bixiso wax aanan ku haysan taleefannada gacanta kale ee noocyo kale ah, laakiin dabcan, waxay ku sameysaa qiime ay dad yar iska celin karaan. Taleefankaaga casriga ah ee cusub ayaa leh nashqad u eg iPhone-ka oo ay ku jiraan alaab qiimo sare leh sida aluminium iyo boortaalin, shaashad leh qaabab aad u yaraaday, processor Snapdragon 820, kamarad Sony ah, 4GB oo RAM ah ... ma jiro wax celiya celceliska, laakiin qiimaheeda qiyaastii 400 € ee loogu talagalay qaabka ugu qaalisan wuxuu kaa tagayaa inaad rabto inaad hadda dhigato.
Taasi waa si sax ah dhibaatada: Xiaomi wuxuu "ku hanjabayay" inuu balaarin doono dhulkiisa uu gaari doono muddo aad u dheer, laakiin maahan. Ujeeddooyinkooda? Baahiyaha, suuq murugsan oo aan adiga ku danaynaynin, dhibaatooyinka baahinta In badan ayaa laga sheegay arrintan laakiin xaqiiqadu waxay tahay Yurub iyo Mareykanka sida kaliya ee qalabkan lagu heli karo waxay noqon kartaa dhinacyada saddexaad., tanina waxay ka dhigan tahay in qiimaheedu uu aad uga sarrayn doono, laga yaabee inuu mar horeba aad ugu dhow yahay noocyada caanka ah, ee rafcaanku gebi ahaanba ku baaba'ayo. Wax badan oo buunbuunin ah iyo soosaare ku jira oo lagu soo bandhigayo shir caalami ah ayaa hadhow la dhihi doonaa ma gaareyso suuqyo sida Yurub iyo Ameerika? Runtii waa tan ugu niyadjabka badan. Nooc la mid ah Xiaomi ma sii jiri karo illaa inta ballanqaadka weligiis ah ee dhowaan iman doona laakiin aan waligiis soo degi doonin.
Alaab-toobiyeyaal aad u tiro badan oo la buuxiyo
Maqnaanshaha war weyn, soo-saareyaashu waxay doorteen inay xoogaa madadaaliyaan oo ay indhaheenna ku soo jiitaan alaabta lagu ciyaaro ee qosolka leh: kaamirooyinka duuba 360º panoramas, ku dayashada "Sphero BB-8" kubbadda iyo muraayadaha xaqiiqda dhabta ah ee meel walba yaal ee horay u socda wax sii xitaa sanduuqyada ColaCao. Xiiso badan, xitaa gadgado qosol badan, oo qaarkood laga yaabo inay wax la yimaadaan (Haa, waan aqoonsanahay in muraayadaha indhaha ay noqon karaan wax mustaqbalka dhow), laakiin imminka waxay kaliya u adeegeen inay noqdaan wax sheeko ku dhex jira carwadda oo leh awood yar oo lala yaabo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » MWC 2016 wuxuu iiga tagayaa dhadhan macaan
Rafael palencia dijo
Ma fahmin, markii Samsung ay sii deysay wax cusub, Apple fanboy wuxuu yiri waxa loogu talagalay, hadda waxay sameyneysaa istiraatiijiyad ka ilaalin badan maxaa yeelay ma aysan abuurin, markii dunida android ay saacadaha soo saartay, waxa loogu tala galay iyo a halka hadhow saacadu ka soo baxayso Apple, hada waxaad leedahay muraayadda iyo kamarada 360 sidaa darteed, oo Apple horayba qaar ayuu uga shaqeeyaa qaarna wuu la baxayaa qaarna ku kacaya 10000 oo doolar (waxaa laga yaabaa in fanboygu iibsado sidaas ayey ku sameeyaan la mid ah kuwa android) markaa anigu ma fahmin, taas waa wax walba oo ku saabsan waxyaalahan sameynta aalado waalan oo qofna uusan u maleyneynin in loo isticmaali doono laakiin wuxuu sababi doonaa xiisaha waxaana laguu xaqiijinayaa in qof uu si fiican u isticmaali doono.
Ku jawaab Rafael palencia
Haa, dhibaatadu waxay tahay in Samsung ay kaliya rabto inay la tartanto Apple halkii ay diiradda saari lahayd kaligeed, waxay horumar ka sameeyeen S6, waxa caadiga ah, in haddii dareeraha qaboojinta, aan arki doonno haddii aysan wax dhibaato ah keenin, laakiin waxba, taasi waa, waxa caadiga ah.
LG, haddii aan ku sharaddeeyo shay ka duwan oo aan sidaa u sii xunayn, laakiin, qalab badan, waxaanan u malaynayaa in dadku aysan doonaynin qalab aad u badan.
IOS 5 Weligaa dijo
Si daacad ah uma aqaano waxa kale ee aad uga baahan tahay mobilka! In badan oo processor-ka ah iyo xusuusta ayaa sabab u ah in ka badan inta ku filan maxaa yeelay markaad iibsato mobiil waxaad u sameysay sabab, sax? Haddiise hadhow ay ku siiyaan isla laakiin ka dhakhso badan, ma waxaad isaga ka dhigaysaa karaahiyo? IPhone 3GS-kayga wali wuxuu u shaqeeyaa sidii ugu farxad badnayd maalintii koowaad, maxaanse had iyo jeer doonayaa? Taasi waxay ahayd dhakhso badan, maya, ka yaraan. Niman yaroo. Waxaan ka hadlaynaa telefoonada, waa wax aan macquul ahayn in la dhigo morraya caqli-gal ah oo aan cudurdaar lahayn iyada oo lagu marmarsiiyoonayo hal-abuurnimo! Degdeg ah oo ku filan in lala barbardhigo 5 sano ka hor, maxaad intaa ka badan dooneysaa? Markay macno darradu sii socoto waxay u ekaan doonaan baabuurka Homer !! Way ka dhaqso badan yihiin uguna waxtar badan yihiin xagga isticmaalka. Barta kubbada, taasi waa hal abuurnimada loo baahan yahay. Qofka aan jeclaynna, haddii uu sidaa u caqli badan yahay, markaa ha bilaabo inuu sameeyo taleefannada gacanta!
Iyo haa, qoraalka oo dhan waa bilaa lahjad iyo qaladaad higaad ah.
Jawaab IOS 5 Weligaa
Futurama: Game of Drones oo hadda ku yaal App Store iOS ah
Apple waxay jawaab rasmi ah siineysaa Maxkamadda kiiska ka dhanka ah FBI-da